श्रम बजार मा मुख्य मूल्य रूपमा अनुभव
रोचक र लाभदायक पेशा लागि रचनात्मक खोज मा हुँदा मानिसहरू अक्सर (लगभग सधैं) एउटा असल तिर्ने काम एक निश्चित अनुभव आवश्यक प्राप्त गर्न बुझ्छु। र हिजो बाँच्न विद्यार्थीहरू, या त अकुशल श्रम मा लगे हुनुपर्छ, वा अरू अर्को 2-3 पाठ्यक्रम लागि आफ्नो क्यारियर सुरु गर्न। यस्तो काम कम भुक्तानी (वा नि: शुल्क) हुनेछ गरौं, तर मानिसहरूलाई मा आफ्नो पढाई को अन्त त अनमोल अनुभव हुन छ।
केही उद्यम मा, जब उच्च शिक्षा को विशेष संस्थाहरु संग सहयोग को अभ्यास विभाग टाउको कक्षाहरू वरिष्ठ उपस्थित र आफ्नो अभ्यास गर्न वा छुट्टी interns रूपमा तिनीहरूलाई आमन्त्रण। यो घटना विद्यार्थीहरू आफूलाई अनुभव मामलामा लागि लाभदायक छ, र यसको आफ्नै कर्मचारी को "बढ्दै" को मामला मा नियोक्ता लागि।
एक सभ्य काम को खोज मा लगे, एक व्यक्ति, उमेर र अनुभव बिना एक सारांश छ। यसको लागि यो कागजात अक्सर निर्णय कर्मचारीहरु सदस्य अर्को खोज्न कम्पनी मा आवश्यक छ कि छैन, वा अझ राम्रो गर्न रूपमा छ छ। आफूलाई छैन वर्तमान को आवेदक, त्यसैले उहाँलाई विचार चयन को समयमा, आफ्नो क्षमता र गुण केवल सारांश मा बनेको छ। यस कागजातमा अनुभव सम्भाव्य नेता सबै कौशल प्रशंसा भनेर र व्यक्ति को ज्ञान र आफ्नो subordinates बीच उहाँलाई हेर्न चाहन्थे यस्तो तरिकाले रंग हुनुपर्छ।
को लागि पेश्की लागि कागजात तयार गर्दा मानव संसाधन व्यवस्थापन (वा मानवअधिकार) भविष्यमा कर्मचारी बुझ्न आवश्यक छ कि सारांश अनुभव - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड। यसलाई थप राम्ररी अरूलाई अध्ययन गर्न आफ्नो इच्छा थियो, र यसैले, यो भाग विशेष ध्यान आवश्यक छ।
यस अध्यायमा "अनुभव" छैन बस आवेदक पहिले (उल्टो कालानुक्रमिक क्रममा, पाठ्यक्रम) काम गर्न मौका पाएका थिए जसमा सबै संगठन सूची गर्नुपर्छ, र प्रत्येक साइट मा मुख्य जिम्मेवारी भाग थियो कि स्थिति के थियो पूर्णतया वर्णन। को रिजुम पढ्ने, को कर्मचारी स्पष्ट उहाँले रोजगारीको अघिल्लो स्थानहरू प्रत्येक प्राप्त गर्न समय थियो कौशल के यसको क्षमता, भित्र कि मान्छे संलग्न के कल्पना गर्नुपर्छ।
को आवेदक पहिले अन्यत्र कार्यरत यदि गरिएको छैन, तर केही अनुभव प्राप्त गर्न लामो समय को लागि अभ्यास गरे, यो पक्कै पनि यो यसो गर्नुपर्छ पनि छ। को उपाधि मा राम्रो ग्रेड एक विद्यार्थी पछि, यो सफलतापूर्वक अभ्यास, चाहेको अनुभव को धेरै वर्ष छ जो एक Slacker भन्दा बढी मनमोहक कर्मचारी को धेरै को लागि सम्पन्न गरेको छ।
सभ्य भुक्तानी संग राम्रो स्थान को लागि एक पर्याप्त लामो खोज सफल थिए छैन जहाँ मामला मा, तपाईंले केही समय यो मुद्दा फिर्ता गर्न पछि त, अझ सरल र कम भुक्तानी विकल्पहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा थप अनुभव, स्पष्ट लाभ हुनेछ, र चतुर र मेहनती, यद्यपि जवान कर्मचारी मालिक याद गर्ने एक मौका सधैं त्यहाँ छ।
उदाहरण धेरै को इतिहास मा व्यक्ति कारण अनुभव कमी गर्न कुरियर, सचिव वा सहायक जुनियर परामर्शदाता द्वारा बसिरहेका, छिटो गम्भीर स्थिति (पनि नेतृत्व) मा संलग्न हुँदा। मुख्य कुरा हो - आफू र आफ्नै सफलता विश्वास।
अस्पतालहरुमा नर्स को कर्तव्य
को FSB प्राप्त कसरी?
रिकभरी रेल रेल। रिकभरी रेल के हो?
जीवनको भूमिका मोडेल
बुद्धिमानी मान्छे को दृष्टान्त। कन्फ्युसियस, हेमिंग्वे, चर्चिल
निसान सेरेना - बीस-दुई अनुभव संग एक minivan
यो मामिला गर्छ वा Rostest EUROTEST किन्न मा iphone
पट्टियां र तार को र्नतकी: भित्री सजावट लागि नृत्य जोडी